यस कारण विहान खाली पेटमा पानी पिउनुपर्छ !
काठमाडौं । पानीले हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगको रक्षा मात्र गर्दैन, यस कोशिकाहरूसम्म पोषक तत्व र अक्सिजन पुर्‍याउने काम पनि गर्छ । बिहान उठ्दा शरीरलाई पानीको अत्यधिक आवश्यकता भइरहेको हुन्छ । त्यसैले उठ्नेबित्तिकै दुई–तीन ग्लास पानी पिउनुपर्छ ।
पानी हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक पदार्थ हो । पानीको कमीले बेहोस् हुने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्था लामोसमयसम्म कायम रहँदा मानिसको मृत्यु नै हुनसक्छ ।
तेलभन्दा खानेपानीमा दोब्बर खर्च
रामेछाप । तेलभन्दा पानी महँगो छ भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । यर्थाथ यही हो । महिनाको ३ सयले भान्सामा तेल पु¥याउने परिवारले सामान्य खानेपानीको जोहो गर्दा ६ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
काठमाडौँ । ‘अघिपछि त्यस्तै हो शिवरात्रीमा छिटफुट भए पनि पानी आउँछ, आएन भने पनि मौसम चाहिँ पक्कै धुमिन्छ’–हिउँदयामको आखिरी समयको महाशिवरात्री पर्व नजिकिदै जाँदा बुढापाकाको यस्तै तर्क सुनिन्छ ।
धेरै चिसो पानी पिउनुहुन्छ ? पाइल्स जस्ता यी समस्याहरू देखिनेछन्
मेलम्चीकाे पाइपलाइनबाट सुन्दरीजलकाे पानी अाजदेखि काठमाडाैँमा
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइनबाट सुन्दरीजलको पानी आज देखि काठमाडौँमा वितरण हुने भएको छ ।